Aasaaska Istaraatijiyadda Iibinta Bulsho ee guuleysta | Martech Zone
Axad, Disembar 14, 2014 Axad, Disembar 14, 2014 Douglas Karr
Soo-galista ka-soo-horjeedka mar walba waxay umuuqataa inay tahay dood socota inta udhaxeysa iibka iyo suuqgeynta. Mararka qaar hogaamiyaasha iibka waxay ka fikiraan hadii ay dad badan leeyihiin iyo lambarro taleefan oo intaa ka badan inay sameyn karaan iibin badan. Suuqyayaashu waxay dareemayaan inta badan inay ka fikiraan haddii ay kaliya heli lahaayeen waxyaabo badan iyo miisaaniyad ballaadhan oo loogu talagalay dhiirrigelinta, inay wadi karaan iibin badan. Labaduba way run noqon karaan, laakiin dhaqanka iibka B2B wuu isbadalay hada iibsadayaashu waxay sameyn karaan dhamaan cilmi baarista ay ugu baahan yihiin khadka tooska ah. Farqiga u dhexeeya iibka iyo suuqgeynta ayaa sii xumaanaya - waana sax!
Iyada oo awood u leh inay baaraan iibsigooda soo socda ee internetka waxay fursad u helayaan xirfadlayaasha iibka inay muuqdaan oo ay ku hawlan yihiin halka iibsaduhu raadinayo macluumaadka. Xirfadlayaasha iibka ee ka faa'iideysanaya awoodda nuxurka kuna dhisaya awooddooda u gaarka ah meelahooda waxay gaarayaan natiijooyin wanaagsan. Blogging, warbaahinta bulshada, fursadaha hadalka, iyo isku xirka ganacsiga ayaa dhamaantood ah dhexdhexaadiyaal ay dadka iibka ah ku soo bandhigi karaan awooddooda ay ku siinayaan qiimaha rajada.
Iibinta B2B, Iibsadayaasha iyo Istaraatiijiyada Iibsiga Bulshada
Goobjoog ka ahaw meesha iibsaduhu joogo - LinkedIn, Twitter, Facebook Groups, iyo boggaga kale ee warshadaha dhammaantood waa bogag isku xirnaanta oo weyn oo xirfadlayaal iibku ka heli karaan iibsadayaal ama ay ku dhisi karaan sumcad weyn.
Bixi qiimo, dhis kalsoonida - Qeexitaanka waxyaabaha, ka jawaabida su'aalaha, iyo caawimaad siinta iibsadayaasha (xitaa ka baxsan alaabadaada iyo adeegyadaada) ayaa kaa caawin doona inaad dhisto kalsoonida.
Qiime + kalsooni = awood - Inaad magac ku yeelato caawinta dadka kale waxay kaa dhigeysaa ili weyn oo iib ah. Iibsadayaasha B2B ma rabaan inay la xirmaan iibiyaha, waxay rabaan inay helaan lamaane kaa caawin kara ganacsigooda inuu guuleysto.
Awooddu waxay keentaa kalsooni - Aaminaadku waa aasaaska ay iibsade kasta oo B2B ah ay go'aan ku gaadhaan. Aaminaadu waa furaha fursad kasta oo ganacsi oo khadka tooska ah waana caadi ahaan caqabadda ugu dambeysa ee go'aanka iibsiga.
Kalsoonidu waxay u horseedaa tixgelin - Markaad hesho kalsoonida iibsadaha, way gaarayaan markay arkaan inaad caawin kartid.
Tixgelinta ayaa soo dhow! - Xirfadle kasta oo weyn oo iibinta ah wuxuu rabaa oo keliya fursadda in la tixgeliyo si ay u iftiimaan oo u dhawaadaan.
Waxaa jira hadalo badan oo kusaabsan iibka badalaya iyo muuqaalka suuq geynta. Laakiin isbeddelkan waxaa horseed ka ah hal arrin oo muhiim ah: the iibiyaha. Qaabka ay dadku wax uga iibsadaan wax soo saarka iyo adeegyada khadka tooska ah si aad ah ayey isu beddeleen sannadihii la soo dhaafay - maalmahanna, iibsadayaashu waxay leeyihiin awood ka badan sidii hore. Si aan wax badan uga fahanno waxa saameynaya macaamiisha maanta, waxaan diyaarinay macluumaad muuqaal ah oo muujinaya dhiirrigelintooda. Noocyada noocee ah ayaa u badan kuwa iibsada? Yay ku kalsoon yihiin? Qalab noocee ah inaad ku shaqeysid si loo fududeeyo habka wax iibsiga? - Jose Sanchez, Iibinta Nolosha.
Dadku waxay ka iibsadaan hogaamiyaasha fikirka kuwaas oo muuqda halka iibsadaha B2B uu raadinayo macluumaad isla markaana siiya macluumaadka iibsadaha uu raadinayo. Dadkaaga wax iibiya ma joogaan?
Tags: b2biibsadayaasha b2biibinta bulshada b2biibinta warbaahinta bulshadakooxda iibkaiibinta bulshada